Tablet တစ်လုံးအတွက် Mobile Companion ဖြစ်စေတာ ဘယ်အချက်တွေလဲ?
Tablet တစ်လုံးအတွက် ဘက်ထရီက ဘယ်လောက် အရေးပါသလဲ?
Tablet အကြောင်း ပြောမယ်ဆိုလို့ စာဖတ်သူတွေ ဖြစ်ကြဖူးလား အရင်မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ အလုပ်လုပ်မယ်လို့ ကြံရွယ်လိုက်ပြီး ထိုင်ခုံရှေ့ ၊ စားပွဲရှေ့ ထိုင်လိုက်တဲ့အခါ တင်ထားတဲ့ Laptop ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ “Battery နည်းနေပြီ” Reminder Message နဲ့ ကြိုဆိုခံရတာမျိုး
အဲ့လိုမှမဟုတ် အလုပ်လုပ်ဖို့ ၁၂ မိနစ်လောက် အချိန်လိုနေတာ ဘက်ထရီက ၁၀ မိနစ်တောင် အားမခံတော့တဲ့ အခြေနေ ဖြစ်နေလို့ အသည်းသန် လုပ်ရတဲ့အခါမျိုး
အဖြစ်များဆုံးကတော့ လုပ်နေရင်းတန်းလန်း ဘက်ထရီသေသွားလို့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မသိမ်းလိုက်ရတာ ၊ တကယ်လို့ Memory က ပြန်မဆယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကြေကွဲရတာပါ
ဒါကြောင့်မလို့ ဘက်ထရီနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘယ်သူမဆို အခက်တွေ့ (အိမ်မက်ဆိုးမက်သလို) ဖူးကြသလို တကယ်လို့များ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေရတဲ့အချိန် ၊ အလုပ်အမြဲလုပ်နေရသူတွေ ပိုဒုက္ခကြုံရတာပါ။
Need Extra Power or Battery
ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ တကယ်တမ်း အလုပ်များနေသူတွေဆိုရင် ၂၄ နာရီ အွန်လိုင်းသုံးနေရသလို တစ်ခါတလေ အစည်းဝေး (ညီလာခံ) သွားရလို့ တွေ့ကရာနေရာမှာ ပလပ်ထိုးသုံးဖို့ အချိန်တောင် မရတတ်လို့ပါ။
ဥပမာ ခရီးဝေးသွားရတဲ့အခါ အခုလိုမျိုး ကြုံလာရင် မလိုလားအပ်ဆုံး အခြေနေက ကိုယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ ဘက်ထရီက Flat Line ဖြစ်မနေဖို့ပါပဲ။
တကယ်တော့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုအတွက် ဘက်ထရီဆိုတာဟာ ဘယ်လောက် စွမ်းဆောင်ရည် ထုတ်ပေးနိုင်သလဲ တွက်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ ပေတံတစ်ခုပါ။
ဆိုကြပါစို့ တက်ဘလက် ၊ စမတ်ဖုန်းတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းပါတယ် ပြောပြော စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းနေဖို့ဆိုရင် ပလပ်ထိုးသုံးမှပဲ ရနိုင်တယ်၊ ခေတ်အနေထားအရ Portable ဖြစ်ဖို့ လိုပေမယ့် Energy Source မရှိတဲ့အခါ ဘာဖြစ်သွားမလဲ?
ဒီနေရာမှာ HUAWEI တက်ဘလက်တွေ အားသာနေတာပါ။ ၂၀၁၉ မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ MediaPad M6 မှာ 6,110 mAh Battery ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ အတွက် ထွက်ရှိလာတဲ့ MatePad Pro မှာတော့ 7,250 mAh Battery သုံးလာခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ တက်ဘလက် ၂ မျိုးလုံးဟာ အံအားသင့်စရာ ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် ပြခဲ့သလို ဘက်ထရီ အသုံးခံ (တာရှည်ခံ) တယ် ဆိုတာထက် MatePad Pro မှာ စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံး Kirin 990 Chipset ၊ Smart Magnetic Keyboard နဲ့ HUAWEI M-Pencil အစရှိတဲ့ Components တွေနဲ့ တွယ်ဆက် အသုံးပြုထားတာပါ။
Hardware ပိုင်းမှာ Powerful ဖြစ်သလို ထူးခြားတဲ့ Software ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက HUAWEI App Multiplier ၊ Multi-window နဲ့ Multi-screen Collaboration အစရှိတဲ့ Features သစ်တွေ ပါဝင်လာပါတယ်။
အခုလို ပြည့်စုံတဲ့ အနေထားတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တက်ဘလက်ဟာ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာတောင် ထောက်ပံ့မှုတွေ အများကြီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ၂၀၁၉ မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြောဆိုတာဖြစ်ပြီး
HUAWEI Tablet ဟာ တင်ပို့ရောင်းချမှုနဲ့ ရောင်းအားအပိုင်းတွေမှာ ထိပ်ဆုံးကရပ်တည်နေတယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ E-Commerce Platforms တွေမှာ ဖော်ပြထားပြီး Media Platforms တွေကနေလည်း ဆုတံဆိပ်တွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် MatePad Pro ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လေ့လာကြည့်တာပေါ့။
တက်ဘလက်မှာ 10.8” Screen နဲ့ 7,250 mAh Battery သုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း HUAWEI Labs ရဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေအရ 1080p ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၂ နာရီ ဆက်တိုက် အားခံမယ်..
Web Browsing တွက်ဆိုရင် ၁၁ နာရီခွဲ ၊ ပုံမှန် Office သုံး App တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ၁၁ နာရီ ရတယ်လို့ တစ်ခါအားသွင်းရုံနဲ့ ရရှိမယ့် Result ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် Single Charge လုပ်ရုံနဲ့ တစ်နေ့တာ အနီးပါး အသုံးခံတာ ဘက်ထရီထက် Kirin 990 ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ တက်ဘလက်တစ်လုံး လိုအပ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပေးနိုင်သလို စွမ်းအင်ခြွေတာနိုင်စွမ်းကလည်း အံမခန်းလို့ ပြောရမှာပါ။
Powered by Kirin with EMUI
ဒိအတွက် EMUI 10 ရဲ့ စွမ်းအင်ခြွေတာမှု လုပ်ထုံးကလည်း ပါဝင်ရသလို နှစ်ဦးပေါင်းမှ တစ်နေ့တာ အသုံးခံတဲ့ Robust Battery Life ရရှိစေတာပါ။
တကယ်လို့များ အလွန်ကျွန်သုံးမိလို့ အားပြန်သွင်းရမယ်ဆိုရင် 7,250 mAh Battery ကို အကြာကြီး သွင်းရမယ်လို့ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒိအတွက်လည်း အဖြေရှိပြီးသားပါ။
MatePad Pro ဟာ 20W Fast Charging နဲ့ 40W SuperCharge စနစ်တွေ ထောက်ပံ့တဲ့အတွက် နာရီဝက် အားသွင်းလိုက်ရုံနဲ့ ၃ နာရီ အသုံးခံမယ့် Battery Capacity ပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
Full Charge အတွက်ဆိုရင် ၂ နာရီခွဲ လိုအပ်မှာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုပဲ အားသွင်း အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ User တွေကို တာရှည်ခံတဲ့ ဘက်ထရီ ထောက်ပံ့မှာပါ။
အခုလို မြန်ဆန်တဲ့ Charging စနစ်အပြင် MatePad Pro ဟာ Wireless အားသွင်းစနစ်ကိုပါ ထောက်ပံ့ထားပြီး 15W Rate နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မိနစ် ၃၀ အားသွင်းလိုက်ရင် ၂ နာရီ အားခံမှာဖြစ်သလို ၁ နာရီ အချိန်ပေးပြီး အားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ၄ နာရီကျော်ကျော် တက်ဘလက်ကို သုံးနိုင်မှာပါ။
Better Sophisticated Charging
ဒါ့အပြင် Wireless Reverse Charging ကို Pioneer လုပ်ခဲ့သူပီပီ MatePad Pro ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Wireless Reverse Charging နည်းပညာအသုံးပြုထားတဲ့ Tablet ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့်မလို့ Power Bank သဖွယ် သုံးနိုင်သလို Qi Wireless Charging ထောက်ပံ့တဲ့ ဘယ် စမတ်ဖုန်း ၊ Headphones တွေနဲ့ Gadgets ပစ္စည်းတွေမဆို အားသွင်းပေးနိုင်မှာပါ။
Revers Charging အတွက် ထွေထူးလုပ်စရာမလိုသလို တက်ဘလက် ကျောပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ Charging Process ကို အလိုလျောက် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။
ဒါနဲ့ Reverse Charging က ဘယ်လိုလဲ? HUAWEI အနေနဲ့ Reverse Wireless Charging နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ ဦးဆောင်နေသူပီပီ Mate 20 Series မိတ်ဆက်တုန်းက ပထမဆုံး အသုံးပြုခဲ့တယ်၊ အခုချိန်မှာတော့ MatePad Pro မှာ ပါဝင်လာခဲ့ပြီး 7.5W Speed နဲ့ အမြန်ဆုံး အားသွင်းပေးနိုင်ပါပြီ။
ဒီပမဏကို မြင်သာအောင် Mate 30 နဲ့ပဲ ပမာပြုရရင် မိနစ် ၃၀ အားသွင်းမယ်ဆိုပါက ၁ နာရီခွဲ အသုံးခံပါလိမ့်မယ်၊ တကယ်လို့များ ၁ နာရီ အားဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် စမတ်ဖုန်းဟ ၃ နာရီ ကျော်ကျော် အားခံမယ့် Battery Capacity ရမှာပါ။
ဒါကြောင့်မလို့ စကားချီးစထားသလို ခရီးဝေးသွားရသည်ဖြစ်စေ အသုံးလိုတဲ့ Device တွေ ဘက်ထရီကုန်သွားတာမျိုး နည်းပါးစေမှာပါ။
အဲ့ဒါကြောင့်လည်း MatePad Pro ဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်း Tablet တစ်လုံးဖြစ်သလို ဘက်ထရီလည်းခံပြီး တခြား Device တွေကိုပါ အားပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ စွယ်စုံရ တက်ဘလက်လို့ ဆိုရမှာပါ။
အနှစ်ချုပ်ပြောရရင် MatePad Pro ဟာ စမတ်ဖုန်းနဲ့ Gadget ပစ္စည်းတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ Mobile Companion ဖြစ်သလို အလုပ်လုပ်ဖို့ Performance လိုတဲ့အခါ Kirin 990 Chipset နဲ့အတူ ဆန်းသစ်တဲ့ နည်းပညာ ၊ စွယ်စုံရ Features တွေနဲ့ တာရှည်ခံတဲ့ Battery Life ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ Tablet တစ်လုံးလို့ ပြောရမှာပါ။
HUAWEI MatePad Pro Homepage
ဖုန်းကင်မရာနဲ့ အကောင်းဆုံး ရိုက်ချက်တွေကို ဘယ်လိုဖန်းတီးကြမလဲ
Xperia 1 II ကို $1,199 တန်ကြေးနဲ့ ကြေညာပစ်လိုက်တဲ့ Sony